Fikradan watchOS 8 waa mid aad u xiiso badan oo leh fursado badan oo wax ku ool ah. | Waxaan ka socdaa mac
Fikradan watchOS 8 waa mid aad u xiiso badan oo leh fursado badan oo wax ku ool ah.
Anagoo tixgelinayna inaanu ku jirno bilowga watchOS 7 noocyada betaWeli waxaa jira ugu yaraan lix bilood ka hor intaanan arag jiilka soo socda ee barnaamijka Apple Watch oo ficil ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan helnay fikraddan Laga soo bilaabo watchOS 8 runta ayaa loo sheegayaa, waxaan jecel nahay waxa aan sameyn karno. Waxay u noqon kartaa musharax aad u wanaagsan inay run noqoto. Aan aragno astaamaha ugu waaweyn ay yihiin.
Weli wax badan ayaa jira si loo arko noocyo cusub oo barnaamijka Apple Watch ah oo ficil ah, laakiin fikraddan watchOS 8 waa in tixgelin la siiyaa. Xuddunta waxaa ka mid ah awoodda wax lagu daro Codsiyada cusub iyo u beddelashada qaybaha nidaamka jira codsiyo kalidii ah. Intaas waxaa sii dheer, shaqo kasta oo caafimaad aasaasi ah waxay lahaan doontaa codsi u gaar ah.
1 Barnaamij gaar ah oo caafimaadka iPhone ah oo ku jira aragtidan watchOS 8
2 Xiddigiska iyo Codsiyada Cadceedda loo qaybiyay.
3 Widgets sidoo kale waxay boos ku leeyihiin Apple Watch
4 Meelo cusub. Sidee ku saabsan Apple TV + sida wareegga?
5 Codsi waxyar ka waxtar badan batteriga qalabkeena
Barnaamij gaar ah oo caafimaadka iPhone ah oo ku jira aragtidan watchOS 8
Apple waa inay ku darsataa barnaamijka caafimaadka daawashada 8 XNUMX iyada oo dadaal loogu jiro in saacadda loo rogo qalab caafimaad oo aad u awood badan oo madax-bannaan. Barnaamij kasta oo jira oo lagu cabbirayo cabirrada caafimaad ee kaladuwan wali wuu jiri doonaa, laakiin si loo daawado xogta caafimaadka ee taariikheed ama dhammaan xogta hadda jirta hal meel, waad isticmaali kartaa barnaamijka cusub ee Caafimaadka. Waa run inaad mararka qaar seegto inaad awoodi karto inaad si toos ah ugu aragto macluumaadka qaarkood tooska saacadda oo kaliya lagu arki karo iPhone-ka.
Xiddigiska iyo Codsiyada Cadceedda loo qaybiyay.
Laba ka mid ah Telefoonnada Apple Watch waxay u shaqeeyaan sidii codsiyo gooni ah. Ka sokow inuu aad u qurux badan yahay. Si kastaba ha noqotee, iyagu maahan kuwo caan ah maxaa yeelay kama baxaan meel badan oo ka mid ah dhibaatooyinka iyo, natiijada, looma isticmaalo inta badan.
Apple waxay u kala qaybin kartaa laba barnaamij oo shaqsi oo cusub. Barnaamijka Solar wuxuu soo bandhigi karaa hab fudud oo lagu arko meesha qorraxda maalintii oo dhan iyadoo la adeegsanayo isla qaab muuqaal ah oo garaaf ah sida wajiga saacadda Solar Graph. Barnaamijka Astronomy-ka ayaa kuu oggolaan kara inaad aragto marxaladda dayaxa ee hadda jirta, sida ay tahay dhulka, isla markaana aad kula ciyaari karto wareegga nidaamka qorraxda.
Widgets sidoo kale waxay boos ku leeyihiin Apple Watch
Asal ahaan, Apple Watch waxaan ku eegi karnaa si dhakhso leh macluumaadka qaarkood. Waxaa loogu talagalay inay soo bandhigaan macluumaad degdeg ah oo muhiim ah oo ka yimid codsiyada dhinac saddexaad. Laakiin mar uun horumariyayaashu waxay awoodeen inay dhisaan barnaamijyadooda hooyo ee ka awoodda badan isla markaana mar uun saacaddu lahayd processor-ka awood badan, mar dambe looma baahnayn.
Widgets-ku waxay ahaayeen cunsur muhiim u ah noocyada cusub ee softiweer ee loogu talagalay iPhone-ka iyo sidaa darteed waa inay isku mid noqdaan Apple Watch. Cabirka yar ee qalabka 'iOS 14 Widget' ayaa haboonaan lahaa. Xarunta Xakamaynta ee ku taal hal bog oo aan wareejin ahayn kuna dar dariiq wareegsan oo u dhexeeya wijetro badan. Xitaa waad ku dheereyn kartaa Widgets-ka iPhone-ka Apple Watch-ka fikraddan watchOS 8.
Meelo cusub. Sidee ku saabsan Apple TV + sida wareegga?
Fikrad software ah oo loogu talagalay Apple Watch lama waayi karin iyada oo aan laga hadlin qaybo cusub. Waa run akhrinta fikradahan fikradda ah watchOS 8, waxaan lahaan karnaa meel Apple TV + ah. Warka, sii deynta soo socota. Meel nool. Laakiin waxaan sidoo kale dooran karnaa inaan helno astaamaha ugu caansan ee adeegga qulqulka, oo iftiiminaya maalinta xoogaa.
Waan arki karnay Snoopy dul sabaynaysa wajiga saacaddaada. Ted Lasso qosolkiisa. Jilayaasha Central Park ayaa heesan kara… iwm. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn. Waxaad sidoo kale ku soo bandhigi kartaa xigashooyin iyo bayaanno ka soo jeeda astaamahan adoo adeegsanaya cilad soo food saartay
Codsi waxyar ka waxtar badan batteriga qalabkeena
Mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee imika kujira iPhone-ka mahadnaqa macruufka 14 ayaa ah macluumaadka batteriga kaliya maahan taleefanka laftiisa laakiin sidoo kale aaladaha kale ee ku xiran. Maxaad ugu arki weyday isla Apple Watch?. Waxaan ku haysan karnaa wax la mid ah Apple Watch maxaa yeelay runti waa waxtar waxtar leh, cad oo waxtar leh. Intaas waxaa sii dheer waad kari kartaa meel fog ka suurta geli fursadaha sida habka awoodda yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Fikradan watchOS 8 waa mid aad u xiiso badan oo leh fursado badan oo wax ku ool ah.
Beats Flex waxay ku bilaabmaysaa laba midab oo cusub: buluug iyo cawl